Oromo Bus Camera Info - Seattle Public Schools
Seattle Public Schools » Departments » Transportation » Student Safety Stop Arm Camera Program » Oromo Bus Camera Info
Barattoota keenya Nageenya Siyaatil eegaa. SEERICHA BEEKAA!
Nageenyi barattootaa dhimma angafa manneen barnootaa uummataa Siyaatil waan ta’eef sagantaan kaameraa nageenya baasii mana barumsaa uummata keeya keessatti seenanii ba’uu baasii mana baerumsaa naga qabeessa ta’u gargaara.
Sisteemiichi Akkamitti Hojjeta
3. Gabatee lakkoofsaa
Qaama diidaa baasii mana barumsaa kana bakka barbachisoo ta’anirratti kaameraawwan hidhamaniiru.
Yeroo baasiin mana barumsaa kun dhaabachuudhaaf diriirfatu, sisteemichi yoo konkolaattonni naannoo kennameef keessa keessaan baasii mana barumsaa kana bira darbuu jehdan dafee arga.
Yoo konkolaataan baasii mana barumsaa bira darbaa jiraate, kaameraan viidiyoo konkolaataa seera cabse agarsiisa.
Fakiiwwan seera cabee viidiyoo kana keeessaa fudhatamu konkolaataa seera cabsee baasii mana barumsaa darbaa jiru qofa osoo hin taane gabatee lakkoofsa konkolaatichaafi kaattuu ittiin dhaabbatu baasii mana barumsaa diriirfates ni mullisa. Viidiyoon konkolaataa seera cabsee akka raga dabalataa seera cabsuutti kaa’ama.
Xiinxalli dhumaa fakiifi viidiyoo seera cabee qonaala seera kabachiisuu nama mirkaneessuu ykn gatuullee danda’uun raawwatama.
Seera cabsuun kun yoo mirkanaa’e, abbaa qabeeyaa konkolaataaf xalayaan waamichaa qophaa’ee ergamaaf.
Baasii mana barumsaaf yoom dhaabachuu akka barbaachisu
RCW 46.61.370: Yeroo baasiin mana barumsaa mallattoo dhaabdahuu baafatee diimaan ifee jiraate, warren motoraa dhaabachuun irraa eegama:
Daandii-tarree lamaa, toora daandii addaan hin baane
Yeroo baasiin mana barumsaa imaltootaaf dhaabbatu, Hunduutiraafikiin kallattii lameenuu dhaabbachuu qabu.
Toora daandii adda hin bane tarreewwan sadiifi isaa ol qabu.
Yeroo baasiin mana barumsaa imaltootaaf dhaabbatu, konkolaatawwan baasii sana waliin gara kallattii tokkootti deemu qofatuu dhaabbachuu qaba.
Toora daandii kallattiii deemsaa lamatti addaan ba’e.
Tiraafikiin dhufaa jiru daandiiwwan qoqqoodamaafi tarree baayyee qaburratti dhaabachuun hin qabu. Baasiin mana barumsaa bakka barataan tokko daandiiwwan gosa akkasii akka ce’u/ceetu barbaachisu dhaabbachuun dhorkaadha.
Gaaffileen Yeroo Baayyee Gaafataman
Kaameraawwan nageenyaa baasii mana barumsaa eessatti argamuu?
Kaameraawwan nageenyaa baasii mana barumsaa bakkeewwan ijoo qaama alaa baasii mana barumsaa Siyaatilirratti tolfamaniiru.
Adabbiin isaa hangamii, galmeen oofisa koo?
Hangi addabii $419. Kun adaba yakkaati, qabxiin kamiyyu kan qoratamu hin jiru.
Baasii mana barumsaaf yoomiifi eessa dhaabbachuun narra jiraa?
Konkolaataan mana barumsaa ifa diimaa wal jijjiiruun bakka mallattoon dhaabachuu jirutti dhaabbata. Yoo xiqqate duraan tarkaanfii 20, duubaanis tarkaanfii 20 konkolaataa mana barumsaarraa fagaattee dhaabbachuu qabda.
Sisteemii ittiin Ifa Ibsan
Ifawwan Diimaafi Bildiimmoo: Gubbaa konkolaataa mana barumsaarratti argama. Kan barbaachiseef yeroo konkolaataan mana barumsaa dhaabbachuuf qophaa’utti motoroota biroo akeekkachiisuuf.
Dhaabuu Qabda – Seeradha.